Maxaa loogu maleynayaa in Pakistan uu afgembi milateri ka dhici doono? - BBC News Somali
Maxaa loogu maleynayaa in Pakistan uu afgembi milateri ka dhici doono?
25 Luulyo 2018
Ololaha doorashada ee dalka Pakistan
Waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay soo idlaato codbixinta doorashada dalka Pakistan. Malaayin qof ayaa lagu wadaa inay soo doortaan dowladda xigta ee dalkaasi, inkastoo qalalaaso laga soo sheegayo deegaanada qaar.
Sarakiisha laamaha ammaanka ee dalkaasi waxaa ay shegeen in nin isa soo midaamiyay uu isku dhex qarxiyay goob ay dadku codkooda ka dhiibanayeen oo ku taalo magaalada Quetta, halkaa na uu ku dilay inkabadan 30 qof.
Kooxda isugu yeerta khilaafada islaamka ee Daacish ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, waxaa sidoo kale lasoo sheegayaa in isku dhacyo u dhaxeeya taageerayaasha dhinacyada siyaasadda, inkastoo la leeyahay inta badan goobaha codbixinta wa ammaan.
Saameynta milateriga iyo doorashada
Isbadaladii xukunka ee ka dhacay Pakistan
Milateriga Pakistan oo dalkaasi soo maamulayay inkabadan soddon sano ayaa loo maleynayaa inay gacan saar la leeyihiin Imran Khan oo kamid ah musharixiinta.
Ra'yi uruurin la sameeyay ayaa muujineysa in loolanka doorashada dalka Pakistan uu u dhaxeyaa ra'iisula wasaarihii xilka laga qaaday ee Nawaz Sharif iyo ciyaaryahan dheela ciyaarta cricket-ka ee Imran Khan.
Waxaase soo bnaxayay walaac ay dhinacyada siyaasadda ka muujinayeen in doorashada ay hareeyso wax isdabamarin iyo qalalaaso. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan waxaa ay shegeen inay jiraan isku dayo la doonayo in lagu farageliyo doorashada.
Mr Khan ayaa ku hanjabay inuu wax ka qaban doono musuqa, hasayeshee dadka sida aadka uga soo horjeeda siyaasadihiisa ayaa waxaa ay ku dhalileen inuu xiriir dhaw la leeyahay milateriga oo ay ka cabsi qabaan in Imran Khan lagaga guuleysto ay miltaeriga sidaasi ku sameyaan afgembi.
Nawaz Shariif oo isna kamid ah musharxiiinta doorashada ayaa xilka laga qaaday, xabsiga na loo taxaabay, kadib markii lagu edeeyay fadeexad musuqmaasuq.
Xiisadda Sudan iyo Itoobiya oo mar kale cirka isku shareertay
Qoyska aduunka dhan ku soo wareegay iyagoo wata gaari 90 sano jir ah?